အင်ျဂလိပျစာ စတငျလလေ့ာသူမြားအတှကျ သံတူကွောငျးကှဲဝေါဟာရ ၉ ခု - Wall...
Home | ဘလော့ချ | အင်ျဂလိပျစာ စတငျလလေ့ာသူမြားအတှကျ သံတူကွောငျးကှဲဝေါဟာရ ၉ ခု
အင်ျဂလိပျစာ စတငျလလေ့ာသူမြားအတှကျ သံတူကွောငျးကှဲဝေါဟာရ ၉ ခု
Mar 08, 2018 &VerticalLine;
အောက်စဖို့ဒ်အင်္ဂလိပ်အဘိဓါန်အလိုအရ သံတူကြောင်းကွဲဝေါဟာရ homophones ဆိုတာဟာစကားလုံး နှစ်လုံး သို့ မဟုတ် ထို့ထက်ပိုများပြီး အဓိပ္ပာယ်၊ ရင်းမြစ်နဲ့ စာလုံးပေါင်းတို့ ကွဲပြားပေမဲ့ အသံထွက်တူညီတဲ့ ဝေါဟာရတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတွေကို ရောထွေး ရှုပ်ထွေးစေပြီး ဒုက္ခဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုမှစတင်လေ့လာတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုပုံကို အသေအချာမလိုက်နိုင်သေးတဲ့ beginner တွေမှာ ပိုပြဿနာတွေ့တတ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအခြေအနေဟာ သင့်အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ပိုမြင့်တက်လာပြီး စကားအဆက်အစပ်နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ပိုဖြစ်လာရင်တော့ ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတာကတော့ WSE က သင့်ကို ကူညီတဲ့အနေနဲ့ နေ့ စဉ်စကားပြောဆိုမှုတွေမှာ သင့်အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ သံတူကြောင်းကွဲစကားလုံး ၉ ခုကို စာရင်းလုပ် စုစည်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ “Bare” and “Bear” - /beə/
He walked around in bare feet because he cosplayedabear on that Halloween Party. (သူဟာ ခြေဗလာနဲ့ လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ အဲ့ဒီ Halloween ပါတီပွဲမှာ ဝက်ဝံဝတ်စုံဝတ်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
• Bare (adj.): အဝတ် မဝတ်ထားသော သို့ မဟုတ် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိသော။
• Bear (n.): ဝက်ဝံ၊ အကောင်ကြီး အမွှေးထူပြီး အသားနှင့်သစ်သီးသစ်ရွက်အစုံစား နို့တိုက်သတ္တဝါ၊ မျောက်ဝံ။
၂။ “Cell” and “Sell” - /sel/
That man, who spent 10 years inaprison cell, is selling vegetables in the market now. (အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ၁၀ နှစ်နေခဲ့ရတဲ့ အဲ့ဒီလူဟာ အခုဆို ဈေးထဲမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောင်းနေပါတယ်။)
• Cell (n.): အကျဉ်းသားကို ပိတ်လှောင်ထားရာ အခန်းငယ်။
• Sell (v.): ငွေကြေးအတွက် တစုံတခုကို ပေးခြင်း (သို့) လွှဲပေးခြင်း။
၃။ “Fairy” and “Ferry” - /ˈfeəri/
I wish the fairy would appear and give usaferry to escape from this island. (ဒဏ္ဍာရီနတ်သမီးလေးတစ်ပါးပေါ်လာပြီး ကျွန်တော်တို့ကို ဒီကျွန်းကနေလွတ်မြောက်အောင် ကူးတို့တစ်စီးပေးဖို့ ဆုတောင်းတယ်။)
• fairy (n.): လူသားအသွင်နှင့် မှော်စွမ်းအားရှိပြီး သေးငယ်သော ပုံပြင်လာ နတ်သမီးငယ်လေး။
• ferry (n.): ခရီးတိုအကွာအဝေးအတွက် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည်များကို သယ်ဆောင်ပေးသော သင်္ဘော (သို့) လှေ။
၄။ “See” and “Sea” - /siː/
You can see the sea when standing on the top of the hill. (တောင်ကုန်းထိပ်မှာ ရပ်နေရင် ပင်လယ်ကို ခင်ဗျားမြင်နိုင်ပါတယ်။)
• See (v.): မျက်လုံးများဖြင့် ရှုမြင်ခြင်း။
• Sea (n.): ကမ္ဘာမြေဧရိယာ အများစုကို ဖုံးလွှမ်းထားသည့် ပင်လယ်။
၅။ “Brake” and “Break” - /breɪk/
He’s the one who breaks the brakes of your bike. (သူကတော့ ခင်ဗျားရဲ့စက်ဘီးက ဘရိတ်ခ်တွေကို ချိုးဖျက်လိုက်သူပါပဲ။)
• Brake (n.): ရွေ့လျားနေသည့်ယဉ်ကို ရပ်တန့်စေ (သို့) နှေးကွေးစေသည့် ကိရိယာ။
• Break (v.): ထိခိုက်မှု ရလဒ်ကြောင့် အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်သို့ ကွဲပြား ပျက်ဆီးသွားစေခြင်း
၆။ “Meet” and “Meat” - /miːt/
John is the kind of person you will meet atavegetarian restaurant because he doesn’t like eating meat. (John က သက်သက်လွတ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ခင်ဗျားတွေ့ရမယ့်လူမျိုးပါပဲ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆို သူက အသား
• Meet (v.): အခြားတစ်ယောက်ယောက်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
• Meat (n.): စားစရာ အသား
၇။ “Knight” and “night” – /naɪt/
In the morning, he’saknight who is loyal to the King. But at night, he’saspy of the neighboring country. (မနက်ခင်းမှာတော့ သူဟာ ဘုရင့်ကို သစ္စာခံတဲ့ သူရဲကောင်းတစ်ဦးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ညဆိုရင်တော့ သူဟာ အိမ်
• Knight (n.): ၎င်း၏ နိုင်ငံကို စစ်သားအဖြစ် အမှုထမ်းသူ စစ်သူရဲကောင်း။ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ စစ်သူရဲကောင်းဆိုသည်မှာ ဂရိတ်ဗြိတိန်တွင် ထူးချွန်ထင်ရှားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသူအား ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သည့် ဘွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Sir ဟု ခေါ်နိုင်သည်။)
• Night (n.): နေဝင်ချိန်မှ နေထွက်ချိန်အထိ ကာလ။
၈။ “Marry” and “Merry” - /ˈmæri/
When I get marry, I want to play the song “We Wish YouaMerry Christmas” on my wedding day. (ကျွန်တော်လက်ထပ်တဲ့အခါ၊ “We Wish YouaMerry Christmas” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ကျွန်တော့်မင်္ဂလာပွဲ
• Marry (v.): တစ်စုံတစ်ဦးအား ဇနီးအဖြစ်သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းအဖြစ် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း
• Merry (adj.): အားလပ်ရပ်တွင် ရှင်သန်ရသကဲ့သို့ဖြစ်သော၊ ပျော်ရွှင်စရာ၊ ကောင်းချီးပေးစရာဖြစ်သော။
၉။ “Pair” and “Pear” - /peə/
I want to buyapair of pears andadozen eggs.(သစ်တော်သီး နှစ်လုံးနဲ့ ကြက်ဥတစ်ဒါဇင် ကျွန်တော်ဝယ်ချင်တယ်။)
• Pair (n.): အတူတကွသုံးရသော အရာဝတ္ထုနှစ်ခု ၊ တစ်စုံ။
• Pear (n.) စိမ်းဝါရောင်သန်းပြီး ချိုမြသော၊ ကြမ်းရှသောအတွင်းသားနှင့် စားစရာသစ်သီး။